संसारभर साँढे चार करोड यौनकर्मी, अमेरिकामा मात्र वार्षिक १५ अर्ब डलर खर्च
नयाँ दिल्लीको केन्द्रमा रहेको जीबी रोडले नयाँ दिल्ली र पुरानो दिल्लीका रेल स्टेसनलाई जोड्छ । यो सडकमा चार–पाँचतले पुराना घर छन् । घरका दोस्रो र तेस्रो तलाका झ्यालमा महिलाहरू देखिन्छन् । २० वर्षे युवतीदेखि ७० वर्षका वृद्धासम्म सडकमा हिँड्ने मानिसलाई नियालिरहेका हुन्छन् । यो दिल्लीको सबैभन्दा ठूलो ...
यी १० विश्व प्रशिद्ध व्यक्ति जसको यौन...
जेष्ठ १८, 2076 काठमाडौँ । यौन सम्पर्क गर्दा गर्दाै ज्यान गुमाएका विश्व प्रशिद्ध १० जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरुको मृत्यु बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए । मानिसहरु जन्मीए पछि एक दिन मर्ने पर्छ । यो एउता जन्म सिद्ध कुरा नै हो । विश्वमा मानिसहरु धेर...
बुढेसकालमा महिलाले पुरुषबाट कस्तो खाल...
जेष्ठ १५, 2076 काठमाडौँ । स्त्री र पुरुषबीच यौन सम्बन्धमा जटिलताहरू मूलतः तीन कारणबाट आउँदछन्— मानसिक, शारीरिक र मनोशारीरिक । प्रौढ अवस्था यस्तो उमेर हो जसमा तीनवटै कारणले यौन जटिलता आउन सक्छ। पुरुषभन्दा महिनावारी बन्द हुने बेलाको आसपासका महिलाको यो उमेर बढी सं...
प्रेमीले उपहारमा नयाँ आइफोन नदिएपछि र...
जेष्ठ १४, 2076 काठमाडौँ । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर घटना साँचो हो । प्रेमीले उपहारमा नयाँ आइफोन नदिएपछि प्रेमीलाई सबैको अगाडि ५२ झापड हानेका थिए । प्रेमिकाले भ्यालेन्टाइन्समा नयाँ आइफोन दिन्छन् अनी साथिको अगाडि सानका साथ चलाउँछु भनेर सोचेकी प्रमेकीलाई उपहारमा नयाँ ...
जेष्ठ १२, 2076 काठमाडौं । कहिल्यै क्षमा मिल्दैन र जीवनभर दुख भैरहन्छ भुलेर पनि यस्तो काम गरे ठहरिनेछ महापाप, जुन सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउ‘दैनन् ।मन्दिरमा गएर निर्जीव मूर्तिलाई फूलपाती अक्षता भ...
युवती देख्दा जीमखानामै हस्तमैथुन !
जेष्ठ ११, 2076 काठमाडौं । सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गरी वीर्य महिलाको कपालमा झारेको विषयले नेपालमा तरंग सिर्जना गरिरहेको छ । त्यस्तो हर्कत गर्ने युवाको खोजी प्रहरीले गरिरहेको छ । यस्तो कार्य नेपालमा मात्रै हुँदो रहनेछ । साउथ अफ्रिकाको वेस्टर्न केप भन्ने सहरको एक ...
शिघ्र वीर्य स्खलनले महिलामा के–कस्तो ...
जेष्ठ ८, 2076 काठमाडौँ । कतिपय जोडीले उत्तेजित लिङ्ग योनिमा पसाउने र लिङ्गलाई बाहिर–भित्र गर्ने अनि स्खलन भएपछि लिङ्ग झिकेर थपक्क कोल्टे परेर सुत्ने किसिमको यौन सम्पर्क गर्छन् । यस्तो स्थितिमा कतिपय महिलाले यौन आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तोमा महिलाको सबैभ...
जब रुख नै रुन थालेपछि...
बैसाख २५, 2076 काठमाडौँ । जो कोहीलाई रुख रनथाल्यो भन्दा अच्चम लाग्न सक्छ । तर अस्ट्रेलियाको पर्थको बाहिरी भागमा पर्ने एक स्थानमा एउटा रूखबाट निरन्तर पानी तप्किन थालेपछि रोएको ठानिएको हो । युकालिप्टस अर्थात् मसलाको रूखबाट यसरी पानी तप्किँदा धेरैले यसलाई रूख रोएक...
गाँजा पिउने महिलालाई यौन सन्तुष्टी धे...
बैसाख २४, 2076 काठमाडौं । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित छ । अन्य देशमा भने गाँजा प्रतिबनिधत छैन । नेपालमा प्रतिबन्धित भए पनि एक अध्ययनले भने गाँजा सेवन गरेर यौन सम्पर्क गर्नेले अन्य समयको तुलनामा बढी यौन सन्तुष्टी पाउने देखाएको छ । अमेरिकामा हालसालै गरिएको एक अध्ययन...
बिवाह मण्डपमै दुलाह पब्जी खेलमा ब्यस्...
बैसाख २२, 2076 काठमाडौं । अहिले समाजिक संञ्जालमा दुलाह बिवाह मण्डपमै पब्जी खेलमा ब्यस्त भएको भिडियो भाईरल भएको छ । भिडियोमा दुलाहा बेहुलीसँग बसिरहेका देखिन्छन् । अहिलेका धेरै मानिसमाझ एउटा लोकप्रिय शब्द सुनिन्छ, जुन शब्द हो– पब्जी । पब्जी भनेको एउटा भिडियो गेम ...
तौल घटाउन आसु : कति रोएँ तौल घट्छ त ?
बैसाख २२, 2076 काठमाडौं । एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि ।तर यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा कस्तो लाग्ल...
अस्ट्रेलियाको सडकमा भेटियो तीनवटा आँख...
बैसाख २०, 2076 अस्ट्रेलिया ।अस्ट्रेलियाका वन्यजन्तु अधिकारीहरूले उत्तरी अस्ट्रेलियाको राजमार्गमा भेटिएको एउटा तीनआँखे सर्पको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । नोर्दन टेरिटोरी पार्क्स एन्ड वाइल्डलाइफ सर्भिसले इन्टरनेटमा धेरैले शेयर गरेको तस्बिरमा देखिएको सर्पलाई अद्भु...
कसरी चिन्ने सेक्सका अत्यन्तै भोका महि...
बैसाख २०, 2076 काठमाडौँ । अक्सर महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । यो मान्यता संसारभरीका महिलामा लागु हुन्छ । प्राय महिलाहरुले थोरै बालेर धेरै भनेका हुन्छन् । सामान्य तरिकाले भन्दा पनि महिलाको शरिरको हाउभाउले धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट म...
पहिलो नजरको प्रेम कति सही हुन्छ जानी...
बैसाख १७, 2076 काठमाडौं । हामीले प्रायः मान्छेलाई एक झलकमै मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छौँ र सो व्यक्तिप्रतिको हाम्रो पहिलो धारणा शक्तिशाली साबित हुन सक्छ भने कहिलेकाहिँ हाम्रो अनुमान गलत पनि हुन जान्छ । यस्तोमा यदि तपाईँ प्रेमको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पहिलो देखभेटमा ध...
यौन सम्पर्क : टाउको दुखाईको अचूक औषधि
बैसाख १५, 2076 काठमाडौं । यौन सम्पर्क गर्दा धेरै फाइदा हुने वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । यौन सम्पर्कले टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् ।आमरुपमा यौन सम्पर्कबाट यति सुख मिल्छ ...